Ukuphambuka kweMagnetic: Ukuqala kweSpecial 'Mocap Anywhere' isisombululo - I-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat. Umsasazo osemthethweni we-NAB Bonisa, uMvelisi we-NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Okufumaneka » Ukuchithwa kweMagnetic: Ukuqala isisombululo seSizwe sokuqala 'seMocap Anywhere'
Ukuchithwa kweMagnetic: Ukuqala isisombululo seSizwe sokuqala 'seMocap Anywhere'
Iinkqubo zokulandelela zisoloko zisetyenziselwa ukurekhoda kunye nokunyuswa kwemithombo ukuya kwiinkcukacha zemizuzu emininzi-nokuba ngaba ifilimu, iTV, imidlalo yevidiyo okanye imidlalo. Nangona kunjalo, kuye kubekho ukukhawulelwa kwindlela yokuthabatha ukunyuswa kweendwendwe, ngokuyininzi ngenxa yemeko engqongqo engqongqo.
Abathuthukisi be-Mocap ngoku bazama ukuvavanya okokuqala isisombululo selizwe 'siphumelele'. Iqela lophando nophuhliso kwi-Xsens ibango baye bakwazi ukuwunqoba imiphumo yokuphazamiseka kwamagnetic kwi-data intratial motion capture caption. Olu phuhliso luza kwenza ukuba uhambo lufakwe kunoma yiphina indawo, kunye nomgangatho ococekileyo wokuvelisa, idatha echanekileyo-kunye nayo yonke ngaphandle kwemfuneko yekhamera okanye i-camera cameras.
Ngoko yintoni ukuphambukisa kweMagnet? Izixazululo ze-Inertial mocap zixhaswe ngeteknoloji ye-fusion, usebenzisa i-input from gyroscopes, accelerometers kunye namagnetometers. Ngaloo ndlela, izixhobo ze-MVN ze-MVN zihamba ngokuthe tye, zivumela ukunyuswa kwesantya ngaphandle kwemfuneko yeekhamera, izigaba, okanye iibhola ezinamathele. Ukubonakalisa kwi-E3 2017, i-suit entsha ye-MVN inokulandelela ukunyakaza malunga nantoni na kuyo - nakwezemidlalo embi kakhulu njenge-skydiving okanye ibhayisikili.
I-Albeit ishibhile kwaye ilula kunokuba isigaba se-mocap esisigxina, ingxaki yokubamba ukuhamba kwindlela ebonakalayo yindlela yokuphambukisa emagqabini - into engasayi kulawulwa yendalo. Ubukho bentsimbi bunokonakalisa idatha efunyenweyo, kufuneke yonke into ecocekileyo.
Ukuxazulula ukuphazamiseka kwamaginethi kuya kuba neenkulu ezinkulu kwii-studio zokubamba izithuthuthu kunye neenkonzo zethekhnoloji emhlabeni jikelele. I-mocap yefowuni inomsebenzi omkhulu kwizinto ezemidlalo, imoto, i-ergonomics kunye neendlela zokuzonwabisa.
XsensIsixazululo se-mocap okwangoku ku-beta evaliweyo, ngokukhululeka okucwangcisiweyo ngoNovemba 2017. Ngamanye amazwi, iteknoloji ixhomekeke ngoku iindidi ezininzi ezikhokela ii-studio ze-Triple-A, kwaye iimpendulo zabo ziye zavuya kakhulu:
Ukwazi "ukuxhatshazwa kwe-Xsens" kukuvumela ukulungelelanisa ukumbamba idatha echanekileyo kwiimeko ezininzi, ngokuchaneka kokuthinjwa kwe-optical. Okubaluleke kakhulu kumsebenzi wethu ekusebenzeni okwenziweyo okuphilayo kwiSenua Studio, apho ukuzinza kwizicwangciso ezingalawulwayo kubalulekile. Le nyathelo elikhulu lihamba phambili kwi-industry ye-mocap. "
I-Xsens ithi iteknoloji iyincedo ngokukhethekileyo kwi-animators-kwaye ingasetyenziselwa ukutshintshela umntu kwihlabathi elithe tye. Abasebenzisi bazaliswe ngokupheleleyo, yonke into ekopishwe, kwinto entsha entsha. Ngaphandle kokuzonwabisa okulula, izicelo zezandla ekuqeqesheni azipheli; ukusuka kwimidlalo yebhola, ukuya kwiimoto zokuvavanya imoto. Esi saziso sinexhotyiswe ngabaqhubi abancinci be-ultra-small to allow for rolls and stunts.
"Kuye kukuvumela ukuba ulawulo lomzimba opheleleyo we-avatar," Uthi Stephenie DeGuzman, uMcwangcisi woShishino ku-Xsens. "Ngoko ke, ukuba udala i-VR okanye umdlalo weVR, umzekelo, unako ukubopha idijithali yakho kwinkqubo yethu enokukuvumela ukuba ubone iingalo kunye nemilenze yakho xa usebenzisana nommandla wakho kwi-VR."
Ekugqibeleni, olu phuhliso oluphambili lucwangciswe ukuba lukhutshwe ngendlela yokuhlaziywa kwesoftware yomkhiqizo okhoyo kwaye iya kukhishwa mahhala kubo bonke abathengi abakhona.
I-suit iyinto equlethwe kuyo-nayo yonke inkcazelo ebhalwe kwi-pack-body body efanelekileyo-kwaye inobomi bebhetri ukuya kwiiyure ze-12. Ixabiso lentengo ye-Xsens iphuma kwi-$ 12,500 ukuya kwi-30,000 eyi-$, into encinci kakhulu kunokwakheka kwenkomfa yeklasi yokukhenketha. Yisisombululo esihle kwi-studios okanye kwi-game developers kunye ne-biomechanical okanye ergonomic analysis and science performance performance.
Olu phuhliso luya kuvula ihlabathi elitsha lamathuba enkqantosi yenkqantosi engazange ifikeleleke ngaphambili.
Inkundla ye-Ultra HD ndiphila	2017-09-12
Previous: I-SMPTE® i-Hollywood Section ukugxila kwi-ATSC 3.0 ngo-Septemba
next: Bluefish444 Ubonisa i-KRONOS, i-IngeSTore Server 3G, i-SMPTE i-2022 API kunye ne-NewTek 4K Ukuhlanganiswa kwi-IBC Show 2017
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Ukugqithisa ukuxhatshazwa kweMagnetic: Isixazululo sokuqala 'seMocap Anywhere'. Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/bypassing-magnetic-interference-the-worlds-first-mocap-anywhere-solution/. Enkosi.